ALinks - Bogga 2 - socdaalka iyo ku noolaanshaha dibedda dhammaan
shaqooyinka Paris ee Hindida
June 11, 2021 Antika Kumari shaqo
Paris waa mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu quruxda badan uguna jacaylka badan. Dad badani waxay rabaan inay aadaan oo ka shaqeeyaan magaalada Faransiiska, oo caan ku ah cunnooyinka aadka u wanaagsan, dukaamaysiga cajiibka ah, jardiinooyinka iyo jardiinooyinka aan dhammaadka lahayn, iyo joie de guud
Durrs waa magaalo deked leh oo ku taal galbeedka Albania, galbeedka Tirana, oo ku taal Badda Adriatic. Waxay caan ku tahay masraxa weyn ee Roomaanka. Sidee shaqo looga helaa Durrës? Boggan wuxuu muujinayaa furitaanka shaqada ee Durrs; in ka badan
Qabashada dambe ee Albania ee dhaqaalaha suuqa xorta ah waxay sababtay kororka furitaanka shaqooyinka ee Tirana. Maaddaama ay sii kordhayaan tirada maalgashiga shisheeye ee dalka, warshado badan ayaa si xawli ah u sii ballaaranaya. Tirana, caasimada Albania iyo gurigeeda
«Wararkii hore 1 2 3 4 ... 68 Xogta ku xiga»